Business page - A better bundle internet Mandalay
အော်ဒါမှာရန် အခုပဲ ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ။ 09-899832040 သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်မှုကို စစ်ဆေးပါ။
Get More Done with Vnet.
Your business demands fast, reliable Internet service and our
flexible plans are designed to deliver. Business-grade speed and 24/7 support
to help keep your business moving forward.
Internet for HOME?
and keep your business moving. An affordable and reliable
internet service with prepaid, no-hassle billing.
ဘာ့ကြောင့် Vnet ဖြစ်ရပါသလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ broadband package များဟာ SME များအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသက်သာဆုံးနှုန်ထြးထားများနှင့် ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ လွန်စွာမြန်ဆန်သော download speed များနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်မပျက်ရစေမယ့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများရှိနေပါတယ်။
Telecom များဟာ လူအများဝယ်ယူနိုင်မည့်နှုန်းထား၊ လိုက်လျောညီထွေရှိခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း၊ မြန်ဆန်စွာတုန့်ပြန်ဖြေကြားခြင်း အစရှိတဲ့အရည်အသွေးတွေရှိနေသင့်တယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့က ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဒီအတွက် ကုမ္ပဏီ များနဲ့ကိုက်ညီမယ့်နှုန်းထားများ၊ package များကို မြင့်မားတဲ့နည်းပညာ၊ သူမတူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အသေးစားနဲ့ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်သာဆုံးနှုန်းထားများရှိနေပါတယ်။
ပေးအပ်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းများနဲ့ အရည်အသွေးအပေါ် အပြည့်အဝ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က သင်လက်ရှိဝယ်ယူထားတဲ့ နှုန်းထားအတိုင်းဆိုပါက မြန်နှုန်း (၂ဆ) နှင့် လက်ရှိနှုန်းထားထက်တစ်ဝက်သာကျသင့်မည့် ဈေးနှုန်းဖြင့် သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မြန်နှုန်းအတိုင်းရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းများရဲ့ အလားအလာများကို အပြည့်အ၀ ရောက်ရှိအောင်မြင်နိုင်စေရန်အတွက်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။ သီးသန့်ကိုင်တွယ်ပေးမယ့် Dedicated account handler တစ်ဦးက လူကြီးမင်းတို့ မေးလိုတဲ့မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးနိုင်ရန်အတွက် အသင့်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုဟာ လုပ်ငန်းလောကတွင် အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့က နားလည်ထားပါတယ်။ သက်သာသောနှုန်းထား၊ လိုင်းမြန်ဆန်မှုနဲ့ အားကိုးရမှုတို့ဟာ အရာရာတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဒီအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး ဈေးနှုန်း အာမခံများ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တူညီသောအရည်အသွေးရှိတဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းအနက် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သင့်အတွက် အသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ အမြဲတမ်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထက်ပိုမိုဈေးသက်သာတဲ့ solution ကိုရှာတွေ့ပါက ထိုဈေးနှုန်းအတိုင်း (ဒါမှမဟုတ်) ဒီထက်ပို၍ သက်သာတဲ့နှုန်းထားများနဲ့ရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ထိုက်သင့်တဲ့ပမာဏကို ကျသင့်ငွေထဲမှ အမြဲတမ်းနှုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ စစ်ပွဲများနဲ့ အခြားသော အကြောင်းအရာများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်မှုများကိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က တာဝန်ယူပြီး အခကြေးငွေ ပြန်လည်အမ်းပေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။
Reliable and consistent office internet
Great for 2-3 computers or other wifi devices
အော်ဒါမှာရန် အခုပဲ ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ။
The most popular business internet
24/7 customer support, service in5hours max.
Great for 4-8 PCs or phones and WiFi devices
Super fast, proffesional, low latencies
24/7 customer support, service in3hours max.
Great for Game shops, small hotels and up to 20 devices
Super fast and low latencies, business internet
Great for 20-30 devices, great for gaming
အထက်ဖော်ပြပါ ဈေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% မပါရှိသေးပါ။
V Net - Mandalay Internet Provider
Mann Myanmar Plaza, 28th St,
Mandalay, Myanmar (Burma),
Copyright (c) 2018 V-Net.